Fampianarana ambony :: Ambony ny filàna mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversite • AoRaha
Fampianarana ambony Ambony ny filàna mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversite
Tsy ampy ny mpampianatra raikitra eny amin’ny oniversite raha ny tatitry ny ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny Seces nandritra ny fihaonambe nataon’izy ireo, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Mila mpampianatra dimampolo sy fitonjato isan-taona ao anatin’ny roa na telo taona eo ho eo, hoy izy ireo, vao ho ampy ny filàna.
“Efa ela no tsy nisy fandraisana mpampianatra, toy ny tamin’ny taona 2017 sy 2018” , hoy ny profesora Ravelonirina Sammy Grégoire, filohan’ny Seces, sampana Antananarivo.
“Antony iray mahatonga an’ireo mpampianatra efa tokony hisotro ronono mbola mampianatra sy manome tan-tsoroka an’ireo hamarana ny fianarany izany”, hoy hatrany ny Seces.
Takin’izy ireo, araka izany, ny hisian’ny fandraisana mpampianatra faobe satria tsy ny eto Antananarivo ireny no voalaza fa tsy ampy fa ny manerana ny Nosy mihitsy.
“Efatra amby valopolo sy dimanjato sy roa arivo ireo mpampianatra mpikaroka ankehitriny. Misy amin’izy ireo anefa no tsy manao ny asa fampianarana fa mitana andraikitra hafa any amin’ny minisitera samihafa. Ireo mpampianatra efa misotro ronono, araka izany, no tambatambazana hanome tan-tsoroka an’ireo mpianatra manomana ny “Master 1 na Master 2”, hoy ny fanampim-panazavan’ny profesora Ravelonirina Sammy Grégoire.
Ankoatra izay, misy ihany koa ireo mpianatra nahavita ny “Master 1” no tsy afaka misoratra anarana hiditra “Master 2” noho ilay tsy fahampiana mpampianatra ihany. Mpampianatra manodidina ny arivo no voalaza fa manao fangatahana ho mpampianatra raikitra ankehitriny.
Fananganana Tana-masoandro :: Miahiahy amin’ny ho aviny ireo tompon’ireo tany hototofana